Qoorqoor: Waxaan fareynaa reer Cadaado inay guryahooda jooggaan | Universal Somali TV
Madaxweynaha Maamulka Galmudug ayaa shacabka ku dhaqan Magaalada Cadaado kula dardaarmay in ay u hoggaansamaan Fariimaha Waaxaha Caafimaadka.
Axmed Cabdi Kaariye (Qoorqoor) ayaa shacabka faray inay guryahooda jooggaan, illaa iyo inta ay wax iska bedelayan xaaladda haataan ka jirta Magaalada Cadaado ee Gobolka Galgaduud.
Madaxweynaha oo shalay galab gaaray Magaalada Cadaado ayaa tilmaamay inaysan dadka ku dhaqmin talooyinka Waaxaha Caafimaadka.
"Waxaan dardaarmeynaa in aad iyo aad loo taxadaro, laga fogaado wax walba oo fududeen kara xanuunkan inuu sii fido. Runtii waxaan leenahay wecyigelinta Fariimaha Caafimaadka aad looguma hoggaansamo, aad looma tixgeliyo, aadna looma dhawro." Ayuu yiri Madaxweynaha.
Madaxweynaha oo ka hadlayay Magaalada Cadaado ayaa yiri "Dadka guryahooda muddo haku nagaadaan bal inta hadda sidaan magaaladaan xaaladeedu tahay, in si gooniya loo xaqiijiyo Insha'Allah."
Waxa kaloo uu yiri "Waxaan dardaarmeynaa in aad iyo aad loo taxadaro, laga fogaado wax walba oo fududeen kara xanuunkan inuu sii fido. Runtii waxaan leenahay wecyigelinta Fariimaha Caafimaadka aad looguma hoggaansamo, aad looma tixgeliyo, aadna looma dhawro."
Isagoo dardaarankiisa sii wata ayuu yiri "Waxaan leenahay weliba Magaalada Cadaado oo hadda daruuf gaar ahi ka jirto, ciidamada amniga, culima'udiinka iyo masuuliyiinta dhammaan qaybaha kala duwan waxaan fareynaa in la xadido isu imaatinyada, maqaaxiyadaha iyo meelaha leeskugu yimaado dhammaan in la xadido."
Kan-xigaQaramada Midoobey oo walaac ka muujis...
Kan-horeDhismihii Stadium Muqdisho oo la soo ...
54,017,273 unique visits